« Festival » : Poeta 70 hi-« Rombom-panahy » | NewsMada
Raha 25 izy ireo tamin’ny herintaona, tafakatra 70 amin’ity taona ity. Tsy iza izany fa ireo mpanoratra, poeta handray anjara amin’ny « Rombom-panahy », « festival » tokana miompana tanteraka amin’ny tontolon’ny tononkalo. Hotanterahina ny 8 hatramin’ny 10 avrily izao, any an-drenivohitr’i Vakinankaratra, ity andiany faharoa ity.
Avy amin’ny faritra manerana ny Nosy izy 70 mianadahy ireto, izay nentanin’ireo nandray anjara tamin’ny taon-dasa mba haneho ny talentany, mandritra ity hetsika goavana ity. Raha tsiahivina, mampiavaka ny « Rombom-panahy » ny fametrahana vina isaky ny andiany : ny famoahana boky, ahitana sombiny amin’ny sanganasan’ireo mpandray anjara.
Tamin’ny taon-dasa, ohatra, nanana tononkalo efatra avy ireo mpanoratra ao anatin’ny boky navoakan’izy ireo, taorian’ny hetsika. Tsy hivaona amin’izay ny amin’ity taona ity. Ezahina hitety faritra ity hetsika, iarahana amin’ny minisiteran’ny Kolontsaina ity.
Tsiahivina hatrany fa tanjon’ny « Rombom-panahy » ny hanoka-baravarana hampahafantatra ireo talenta any ambadibadika any. Antony iray nandrisika ny mpikarakara rahateo ny fahitana fa manana poeta tokony hivelatra ny tontolon’ny asa soratra eto Madagasikara, saingy mbola takotakona any ho any izy ireny.
Marihina fa nisy ny boky « Rombom-panahy » navoaka tamin’ny andiany voalohany. Sanganasana poeta maro no voarakitra tao anatiny.